Laptop မှာ နောက်ထပ် Screen တစ်ခုအနေနဲ့ ချဲ့သုံးလို့ရမယ့် DUO (screen extender) – DigitalTimes.com.mm
လပ်တော့ပ်တစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာလေးပေါ်လာပါပြီ။ PC မော်နီတာနဲ့သုံးပြီးမှ လပ်တော့ပ်ကိုပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်လို အားမလိုအားမရဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့တော့ အကိုက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်မှုပမာဏကို ၅၀% လောက်တိုးမြှင့်ပေးမယ့် multitasking အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ ပါးလွှာပေါ့ပါးတဲ့ DUO Laptop screen Extender လေးပါပဲ။
ဘယ်လပ်တော့ပ်မဆို နောက်ကျောမှာ DUO လေးကို တွဲလိုက်တာနဲ့သုံးလို့ရပြီး သွားလေရာသယ်သွားနိုင်တာက အဆင်ပြေစေတဲ့တစ်ချက်ပါ။ အသုံးပြုပုံကတော့
၁. သံလိုက်ကပ်ခွာလေးကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကပ်လိုက်ပါ။
၂. အဲဒီသံလိုက်ကပ်ခွာပေါ် DUO လေးကိုထားလိုက်ပါ။
၃. USB ကြိုးတပ်ပါ။
၄. DUO ရဲ့ Screen ကိုဆွဲထုတ်ပါ။
၅. ဘယ်ဘက် ညာဘက် ကြိုက်တဲ့ဘက်ကို ဆွဲထုတ်သုံးလို့ရပါတယ်။
၆. Information Share ချင်တဲ့အခါ DUO ရဲ့ ကျောဘက်ကို လပ်တော့ပ်နဲ့ကပ်ထားလိုက်ပါ။ ကျောချင်းကပ်အနေအထားနဲ့ဆို ၂ယောက်လုံးကြည့်လို့ရပါပြီ။
Resolution အတွက်စိတ်ပူနေရင်တော့ သူ့မှာ 1080p high-resolution display ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် မကြည်မလင်ဖြစ်မှာတွေစိုးရိမ်စရာမလိုလောက်ပါဘူး။ USB ကြိုးတပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဘယ်လပ်တော့ပ်နဲ့မဆိုချိတ်နိုင်ပြီး 12.5-inch ဆိုဒ်ဖြစ်လို့ အဆင်ပြေလောက်တဲ့ ဆိုဒ်မျိုးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ Specs လေးတွေကို အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်.. (အောက်ဆံးမှာ ဗီဒီယိုလေးပြထားပါတယ် 😉
ဈေးနှုန်းလေးကတော့ Indiegogo မှာဆို $199 ပဲရှိပါတယ်။ Pre-orderမှာလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂၀၁၉ မှပဲ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref: KICKSTARTER/ DigitalTrends
လပျတော့ပျတဈလုံးနဲ့အလုပျလုပျနတေဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျတော့ စိတျဝငျစားစရာလေးပျေါလာပါပွီ။ PC မျောနီတာနဲ့သုံးပွီးမှ လပျတော့ပျကိုပွောငျးသုံးတဲ့အခါမှာ ကြှနျတေျာ့လို အားမလိုအားမရဖွဈတတျတဲ့သူတှနေဲ့တော့ အကိုကျဖွဈမယျထငျပါတယျ။ သူကတော့ ကိုယျ့ရဲ့အလုပျလုပျနိုငျမှုပမာဏကို ၅၀% လောကျတိုးမွှငျ့ပေးမယျ့ multitasking အတှကျအဆငျပွတေဲ့ ပါးလှာပေါ့ပါးတဲ့ DUO Laptop screen Extender လေးပါပဲ။
ဘယျလပျတော့ပျမဆို နောကျကြောမှာ DUO လေးကို တှဲလိုကျတာနဲ့သုံးလို့ရပွီး သှားလရောသယျသှားနိုငျတာက အဆငျပွစေတေဲ့တဈခကျြပါ။ အသုံးပွုပုံကတော့
၁. သံလိုကျကပျခှာလေးကို ကှနျပြူတာပျေါကပျလိုကျပါ။
၂. အဲဒီသံလိုကျကပျခှာပျေါ DUO လေးကိုထားလိုကျပါ။
၃. USB ကွိုးတပျပါ။
၄. DUO ရဲ့ Screen ကိုဆှဲထုတျပါ။
၅. ဘယျဘကျ ညာဘကျ ကွိုကျတဲ့ဘကျကို ဆှဲထုတျသုံးလို့ရပါတယျ။
၆. Information Share ခငျြတဲ့အခါ DUO ရဲ့ ကြောဘကျကို လပျတော့ပျနဲ့ကပျထားလိုကျပါ။ ကြောခငျြးကပျအနအေထားနဲ့ဆို ၂ယောကျလုံးကွညျ့လို့ရပါပွီ။
Resolution အတှကျစိတျပူနရေငျတော့ သူ့မှာ 1080p high-resolution display ကိုသုံးထားတဲ့အတှကျ မကွညျမလငျဖွဈမှာတှစေိုးရိမျစရာမလိုလောကျပါဘူး။ USB ကွိုးတပျလိုကျရုံနဲ့ ဘယျလပျတော့ပျနဲ့မဆိုခြိတျနိုငျပွီး 12.5-inch ဆိုဒျဖွဈလို့ အဆငျပွလေောကျတဲ့ ဆိုဒျမြိုးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ Specs လေးတှကေို အောကျမှာတဈခကျြကွညျ့လိုကျရအောငျ.. (အောကျဆံးမှာ ဗီဒီယိုလေးပွထားပါတယျ 😉
ဈေးနှုနျးလေးကတော့ Indiegogo မှာဆို $199 ပဲရှိပါတယျ။ Pre-orderမှာလို့ရနိုငျပွီဖွဈပွီး မတျလ ၂၀၁၉ မှပဲ ရောကျရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။
DUO screen extenderMobile Pixels